आज यी नदीहरुमा बहाव बढ्ने संकेत, सतर्क रहन अनुरोध - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार आज यी नदीहरुमा बहाव बढ्ने संकेत, सतर्क रहन अनुरोध
आज यी नदीहरुमा बहाव बढ्ने संकेत, सतर्क रहन अनुरोध
कर्णाली र यसका सहायक नदीहरुमा आज पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान छ ।
कोसी, नारायणी, महाकाली र यिनका सहायक नदीहरूमा पनि बहाव बढ्नेछ । विशेषगरी सुनकोसी, तामाकोसी, दूधकोशी, अरुण, तमोर, त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी कालीगण्डकीमा बहाव बढ्ने र केहीमा सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने पूर्वानुमान छ ।
कन्काई र यसका सहायक नदीहरूमा पनि बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कमला, वाग्मती, पूर्वी राप्ती, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबईलगायतमा बहाव सामान्य घटबढ हुने तथा सतर्कता तहभन्दा तलै रहने पूर्वानुमान छ ।
संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, मनाङ, कपिलवस्तु, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कैलाली र आसपास जिल्ला भई बहने स–साना नदीहरुमा बहाव बढ्नेछ । केहीमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने पूर्वानुमान छ ।
नदी तटीय तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
Previous articleग्राण्डी अस्पतालका ‘बेस्ट डाक्टर’ को प्रमाणपत्र नक्कली
Next articleओलिम्पिक्समा गौरिकाको खेल कहिले?
मेस्सीले पीएसजीबाट कुन टिमविरुद्ध कहिले गर्दै छन् डेब्यू?
मोबाईलको ब्याकग्राउन्डमा यसरी बजाउन सकिन्छ युट्युब म्युजिक
छोरी जन्मने आशामा १३ छोरा जन्माएका दाम्पत्ती भन्छन्, छोरी नजन्मेसम्म रोकिदैनौं